ပိုလီဆီလီကွန်ကို ယေဘူယျအသုံးပြုရသည့်အကြောင်းရင်းများစွာရှိသည် - သတင်း - Cixi City Rixing Electronics Co., Ltd
1. ပုံပန်းသဏ္ဍာန် ကွာခြားချက်
သဏ္ဌာန်အားဖြင့် လေးထောင့်ကျ၏။monocrystalline ဆီလီကွန် ဆိုလာပြားမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အမှတ်အသားမရှိ၊ polycrystalline silicon ဆိုလာပြား၏ လေးထောင့်များသည် စတုရန်းထောင့်များဖြစ်ပြီး မျက်နှာပြင်သည် ရေခဲပန်းများနှင့် တူညီသော အမှတ်အသားများရှိသည်။
2. အထက်ဖော်ပြပါ ခြားနားချက်ကို အသုံးပြုပါ။
သုံးစွဲသူတွေအတွက်တော့ ကွာခြားမှုသိပ်မရှိပါဘူး။monocrystalline ဆီလီကွန် ဆိုလာပြားများpolycrystalline silicon ဆိုလာပြားများနှင့် ၎င်းတို့၏ အသက်နှင့် တည်ငြိမ်မှုသည် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ monocrystalline silicon နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်၏တူညီသောပြောင်းလဲခြင်းစွမ်းအားသည် polycrystalline silicon ထက် 1% ခန့်ပိုမိုမြင့်မားသော်လည်း၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် monocrystalline silicon ဆဲလ်များကိုတစ်ပိုင်းစတုရန်းပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည် (လေးဖက်စလုံးသည် arc ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်သည်)၊ အကြောင်းမှာအပိုင်းတစ်ခုရှိလိမ့်မည်၊ ဆိုလာပြားများ ဖွဲ့သောအခါ ဧရိယာ။ မပြည့်ပါ။ polysilicon သည် စတုရန်းဖြစ်သောကြောင့် ပြဿနာမရှိပါ။
polycrystalline silicon ဆိုလာဆဲလ်များ ထုတ်လုပ်မှုတွင် သုံးစွဲသည့် စွမ်းအင်သည် 30% ခန့် လျော့နည်းသည်။monocrystalline silicon ဆိုလာဆဲလ်များ. ထို့ကြောင့်၊ polycrystalline silicon ဆိုလာဆဲလ်များသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ ဆိုလာဆဲလ်ထုတ်လုပ်မှု စုစုပေါင်း၏ ကြီးမားသော အချိုးအစားအတွက် ပါဝင်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်သည် monocrystalline silicon ဆဲလ်များထက် လျော့နည်းပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ polycrystalline silicon ဆိုလာဆဲလ်များကို အသုံးပြုခြင်းသည် စွမ်းအင်ချွေတာပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်လိမ့်မည်။